मोबाइल शत प्रतिशत चार्ज गर्नुहुन्छ ? यस कारण छ खतरा « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
मोबाइल शत प्रतिशत चार्ज गर्नुहुन्छ ? यस कारण छ खतरा
४ पुष २०७३, सोमबार १२:१४
तपाईंले याद राख्नुभएको होला कि चार्ज भएपछि तपाईंको ब्याट्रि तातो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फोनलाई तातो स्थानमा वा कुनै डिभाइसमाथि राखेर चार्ज गर्नबाट बच्नुहोस् । एजेन्सीबाट
प्रकाशित : ४ पुष २०७३, सोमबार १२:१४